WARBIXIN:-1-dii Luuliyo 56 Sano Kadib 1960-kii Soomaaliya oo Gumyesi Gashay | Voice Of Somalia
WARBIXIN:-1-dii Luuliyo 56 Sano Kadib 1960-kii Soomaaliya oo Gumyesi Gashay
Posted on July 3, 2016 by Voice Of Somalia Image
Xarunta madaxtooyada ee magaalada Muqdisho oo ay gacanta ku hayaan ciidamo shisheeye ayaa waxaa habeenkii hore laga xusay munaasabadda 1-da luuliyo, iyadoo uu madaxweyne Garguurte khudbadiisa ku sheegay in dalku xor yahay oo Soomaaliya meel wanaagsan mareyso.
Sidoo kale waxaa jiray hayeeyo kale oo la halgamay gumeystaha illaa markii dambe laga soo gaaray sannadkii 1960 1-dii Luuliyo oo ay isku furmeen gobolada Wuqooyi iyo Koofur oo ay Talyaaniga iyo Ingiriisku kala heysteen, goortaas oo la asteeyay in Soomaaliya Xoriyad qaadatay.
Halkee Buu Xaal Marayaa Hadda oo 2016 Ah.
Soomaaliya oo 1884-tii loo qeybiyay shan ayaa waxaa maanta mar kale loo sii qeybiyay sagaal maamul oo dhammaantood ka shidaal qaata cadawgeenii soo jireenka ahaa ee Itoobiya. Maamuladan ayaa waxaa hogaan looga dhigay dad intooda badan qurbaha lagu soo diyaariyay, kuwaasoo gaaray heer ay ansixiyaan shuruucda Qowmu Luudnimada ee sida aadka ah loo hadal hayo maalmahan.
Siyaasad ahaan waxaa dalka xukuma Qaramada Midoobay, waxay dajisaa qorshaha dowladda iyo maamul goboleedyada sida:- shirarka, doorashada, mooshinada xildhibaanada, xallinta khilaafaadyada iyo wax yaabaha lamidka ah. Madaxweynaha DF Xassan Sheekh Maxamuud wuxuu horraantii sannadkan sheegay inuu ku jah wareeray siyaasadda beesha caalamka islamarkaana aanu garanayn halka ay Soomaaliya u wadaan iyo goorta la abaal marin doono isaga iyo madaxda bugta ee lamidka ah.
وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا : قال الله تعالى
Aniga waxaan ku talin lahaa inaan qaadano awaamiirta Allaah oo aan jidkiisa ku dagaalanno si aan u helno raali ahaanshihiisa, cizi aduun iyo mid aakhiro. Jihaadku maanta waa waajib, qofkaan dooneyn inuu jidka Alle ku dagaalamo oo janno raadsado, xataa waxaa la gudboon inuu difaacdo naftiisa, hantidiisa iyo ehelkiisa. قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا
“Ninkii Dhoof Ku YimidBaa Geeridu Dhibaysaa
DhulkaSoow Anigu Malihi?”
“Nin dharbaaxo quureed dugsaday Dhaqanyadeed maalye
Dhashaadey sugtaa xaajadaad dhowrataa abide”
GOORMEY BARAARUGI DOONTAA SOOMAALIDU
DAAWO:-Banaanbax Ka Dhan ah Dowladda Kenya oo Ka Dhacay Nairobi.